Ukuba izivakalisi zabafundi be-ESL
Abafundi besiNgesi kufuneka bafunde ukuba izivakalisi, ezaziwa ngokuba njengeemeko ezingqinelanayo, ukuze zixoxe ngamathuba amaninzi afanelekileyo okanye acinga. Landela isingeniso esingezantsi, uya kufumana uludwe lwegrama kunye nenkcazo nganye ngexesha. Xa usuqhelene nale fom, sebenzisa izinto ezichazweyo ukuze usebenzise kwaye uqhubeke nokuqonda kwakho kwezi fom. Ootitshala bangaprinta izixhobo zokuqonda ezihambelana nezixhobo, kunye nezicwangciso zesifundo eziphakanyisiweyo kunye nemiyalelo ngeengongoma ngeendlela zokufundisa iindlela zeemeko kwiklasi.
Izinto ezisisiseko: Ziziphi na izivakalisi?
Ukuba izivakalisi zisetyenziselwa ukuxoxa ngezinto ezenzekayo ngokusekelwe kwimeko ethile into eyenzekayo. Kukho iintlobo ezintathu eziphambili zezivakalisi.
Sebenzisa ukuba isivakalisi kwisimo sokuqala sokuqwalasela okwenene, iziganeko ezinokwenzeka kwixesha elizayo okanye elizayo:
Ukuba imvula, ndiya kuthatha isambulela.
Sebenzisa ukuba izivakalisi kwimeko yesibini ukucinga ngezinto ezingaqhelekanga, iziganeko ezingenakwenzeka kwixesha elizayo okanye elizayo:
Ukuba ndineedola eziligidi, ndithenga indlu enkulu.
Ukuba isigwebo kwisithintelo sesithathu sichaphazelekayo (iziphumo) zeemeko ezidlulileyo:
Ukuba wayechithe ixesha elongezelelweyo lokufunda, wayeya kudlula le mvavanyo.
Ukuba Ubume beSaziso soBume:
Ukuba Isivakalisi # 1 = Umqathango wokuqala
Ukuba + i-S + ibonisa izinto ezilula, + i-S + iya kwenza + izenzi + zento
-> Ukuba abafana bawugqiba umsebenzi wabo wesikolo ekuqaleni, baya kudlala ibhola.
Ukuba Isivakalisi # 2 = Isibini sesibini
Ukuba i-S + idlula izinto ezilula, + i-S + iya kuba + izenzo +
-> Ukuba uthenge imoto entsha, uya kuthenga iFransi.
Ukuba Isivakalisi # 3 = Isimo Sithathu
Ukuba + i-S + idlulileyo, + i-S + yayiza kubakho + inxaxheba
-> Ukuba wayembonile, wayeya kuxubusha imiba naye.
Isifundo Ukuba izivakalisi ziphantsi:
Nantsi isiqulatho esicacisiweyo kuzo zonke iifom ezinemiqathango kunye nemibandela, izinto ezingabalulekanga kwimigaqo kunye nesikhokelo esakhiweyo.
Isikhokelo esinye sinika iinketho zabafundi bezinga eliphezulu. Ekugqibeleni, esi sikhokelo sokukhetha phakathi komqathango wokuqala okanye wesibini sinika uncedo oluthe xaxa ekunqumeni ukuba ungasebenzisa ngokwenene okanye ungenangqinelaniyo.
Ukuvavanya Ukuqonda kwakho Ukuba izivakalisi:
Emva kokuba ufunde imigaqo-okanye ukuba sele uyayazi imigaqo-vavanya ulwazi lwakho:
Abafundi bezinga eliphambili apha kukufunda umxholo wokuqonda umxholo ojolise ekusebenziseni imeko yesithathu.
Fundisa Isifundo malunga nokuba izivakalisi:
Isifundo sokuqala nesibini sesimo sengqesho sisebenzise ukuqonda ngokufunda malunga nexesha eliphuthumayo ukunceda abafundi bafumane kwaye bahlolisise iifom. Emva kokuba abafundi bekhululekile ngefom, baxoxisana nezinye iimeko ezinzima okanye ezingavamile usebenzisa umqathango wokuqala kunye wesibini
Le miqathango ye-tic-tac-toe ngumdlalo omhle wokunceda abafundi bahlalutye bonke abathathu ukuba iifomu zezivakalisi.
Ekugqibeleni, nantsi impendulo enemibuzo enemibuzo ekhutshiweyo yokusebenzisa eklasini.
Ukuba imisebenzi yeSigwebo:
Ziqhelanisa ukuba izivakalisi zineengoma zegrama. Ukusebenzisa iingoma , wena kunye neeklasi zakho unokwenza isakhiwo ukuze sibe yendalo kwaye kulula ukuyikhumbula.
Iilwimi zesiTaliyane: iRadersi
Abafazi kunye neZiNyunyana
I-NYU kunye neNqununu
Iidemon ezixhamlileyo ezifumana i-GED, Uludwe lweNombolo 2
Abalawuli beNtombi zeXesha le-18